[Top 10] Găng tay rửa bát chén tốt nhất cho các bà nội trợ | Muasalebang - Muasalebang
Đang Đọc: [Top 10] Găng tay rửa bát chén tốt nhất cho các bà nội trợ | Muasalebang in Muasalebang
Amagilavu ​​okugeza izitsha aya ngokuya ekhethwa omama abaningi bezindlu ukwenza ukugeza izitsha kube lula futhi kube mnene. Ngesikhathi esifanayo, isiza ukuvikela izandla kugrisi, kumakhemikhali, nasezihlahleni.
Njengamanje, lo mugqa womkhiqizo emakethe uthandwa kakhulu futhi uhluke kakhulu, okwenza abesifazane badideke ekukhetheni. Isihloko esilandelayo, sethula amagilavu ​​angu-10 angcono kakhulu okugeza izitsha namuhla.
1 Ayini amagilavu ​​okugeza izitsha?
2 Izinzuzo zamagilavu ​​okugeza izitsha
3 Ungawakhetha Kanjani Amagilavu ​​Okugeza Izitsha
3.1 Ukuhlolwa Kokuqina, Ukuze Kusetshenziswe Kalula
3.2 Izinto Zokuhlola, Khetha Ngokuvumelana Nenhloso Yokusebenzisa
3.3 Khetha usayizi omkhudlwana, osebenziseka kalula
3.4 Uma Izandla Zakho Zizwakala Zilukhuni, Khetha I-Powder Free
3.5 Uma Uthanda Ukufudumala, Khetha Amagilavu ​​Ane-Inner Lining
4 Amagilavu ​​Okugeza Izitsha aphezulu ayi-10 adumile
4.1 1. Amagilavu ​​okugeza izitsha ane-OEM afakwe ulayini GTRB-01
4.2 2. I-OEM Izwa I-Lining Latex Gloves GG24
4.3 3. I-Showa Oil Resistant Dish Gloves 707D
4.4 4. Ukusebenzisa I-Vinyl Gloves Engashadile (ama-pcs angu-100)
4.5 5. I-Goldsee Smart Dishwashing Gloves GS0043
4.6 6. Amagilavu ​​enayiloni e-Seiwapro (ama-pcs angu-100)
4.7 7. Showa Showa Dishwashing Gloves
4.8 8. I-Ansell 2-Color Dishwashing Gloves 87-900
4.9 9. Amagilavu ​​eSilicone
4.10 10. 3M Scotch-Brite Household Gloves Lemon Flavour
Ayini amagilavu ​​okugeza izitsha?
Amagilavu ​​okugeza izitsha ayithuluzi abesifazane abaningi abalisebenzisela ukugeza izitsha, ukuvikela izandla zabo emiphumeleni yamafutha, amakhemikhali okuhlanza, nezinto ezicijile. Yenziwe ngezinto eziningi ezahlukahlukene, amasayizi obude abehlukene aletha ukukhetha okunethezeka kubasebenzisi.
Izinzuzo zamagilavu ​​okugeza izitsha
Njengoba sazi, oketshezini lokugeza izitsha luqukethe izithako zokuhlanza, amakhemikhali ayingozi. Ngakho-ke, kufana ne-bulletproof vest ukusiza ukuvikela isikhumba sezandla. Amakhemikhali akuketshezi lokugeza izitsha enza isikhumba sezandla sibe mncane, sicwecwe kalula futhi some ngemva kwesikhathi eside sithintana. Ngakho-ke, ukusetshenziswa kwamagilavu ​​kuzokhawulela le miphumela.
Kuzosiza ukuvikela izandla kuma-ejenti afana namanzi, okokuhlanza, amafutha, iphunga lokudla, …. Ngesikhathi esifanayo, kusiza ukugwema izilonda zesikhumba ezingase zibe sengozini yokutheleleka uma unamathela ngamafutha, ukuhlanza amakhemikhali.
Ukugeza izitsha kuzoba lula ebusika obubandayo, kuletha umuzwa ofudumele kumsebenzisi futhi kusize izitsha ukuthi zihlanzeke.
Ungawakhetha Kanjani Amagilavu ​​Okugeza Izitsha
Ukuhlolwa Kokuqina, Ukuze Kusetshenziswe Kalula
Njengamanje amagilavu ​​anezinhlobo ezimbili, azacile futhi awugqinsi. Kuye ngenjongo nezidingo zokusetshenziswa, khetha uhlobo olufanele lweglavu.
Uma umsebenzisi ehlanzekile, engumuntu ocophelelayo ofuna ukuzizwa eyiqiniso lapho ephatha izitsha nokusala, kufanele kusetshenziswe amagilavu ​​amancane. Ngoba kulokhu, uma usebenzisa amagilavu ​​aminyene, kuzoba nzima ukuthi iminwe izwe izinsalela ezisanamathele ezitsheni. Ngakho-ke, ukukhetha amagilavu ​​​​amancane kuyisinqumo esihle kakhulu.
Esikhathini esibandayo, kufanele ukhethe amagilavu ​​aminyene, avikela kahle izandla zakho futhi enze ukugeza izitsha kube lula. Ngalolu hlobo, ukuqina okuphezulu kunzima ukudabula, ngakho-ke akukho ukwesaba ukuthi amanzi angena esandleni.
Izinto Zokuhlola, Khetha Ngokuvumelana Nenhloso Yokusebenzisa
Njengamanje, kunezinhlobo eziningi zamagilavu ​​emakethe ezenziwe ngezinto ezahlukene. Futhi uhlobo ngalunye lwezinto ezibonakalayo luzoba nezici zalo. Ngakho-ke, khetha ngokuvumelana nokusetshenziswa okuhlosiwe bese ukhetha ngokufanele.
I-Vinyl chloride impahla: Amagilavu ​​enziwe ngale nto ashibhile. Ngemiklamo ehlukahlukene kanye nokuthungwa, impahla ifanele ukusetshenziswa okuningi okuhlukene. Ngaphandle kwalokho, le nto ingakwazi ukumelana namafutha, izinga eliphansi lokugqoka futhi ingasetshenziswa isikhathi eside. Nokho, ukumelana nokushisa kwaleli glavu akuphakeme.
Izinto zenjoloba yemvelo: Lolu hlobo lwezinto lune-elasticity ephezulu futhi lunomphumela wokuvimbela imihuzuko, ukumelana nokushisa okuphezulu. Zizwe ukhululekile uma usebenzisa. Kodwa-ke, ngezinto zenjoloba, ngakho-ke abanye abantu bazoba ne-allergic kuyo, ngakho cabanga ngokucophelela lapho ukhetha.
Impahla ye-Nitrile: Lesi yisici esimelana nowoyela kanye namabala amakhemikhali, ahlala isikhathi eside futhi awabizi. Ngokumelana nowoyela okuqinile, kulula ukuyisebenzisa lapho uhlanza izitofu nama-microwave, kanye nezitsha zokupheka. Kule nto kunezinhlobo eziningana ezilahlwayo, ezincane futhi ezinamathele esandleni. Ngesikhathi esifanayo, kuzoba lukhuni ekushiseni okuphansi.
Izinto ze-polyethylene: Lena impahla yegilavu ​​elahlayo, incane futhi ifanele ukugeza inani elincane lezitsha, futhi inokuphila okufushane kweshelufu. Ngaphandle kwalokho, lolu hlobo lomugqa womkhiqizo owenziwe ngale nto lungasuswa ngokushesha.
Khetha usayizi omkhudlwana, osebenziseka kalula
Ubukhulu bamagilavu ​​bunezinhlobo eziningi ezahlukene, ezinkulu nezincane ziyatholakala. Kodwa-ke, ukuze kube lula ukusetshenziswa nokunethezeka, kufanele ukhethe amagilavu ​​​​amakhudlwana kunesandla sakho. Ngokuqondene namagilavu ​​aqinile, kulula ukuwasebenzisa, kodwa kuthatha isikhathi eside ukuwagqoka nokuwakhumula. Futhi ehlobo, kulula ukujuluka.
Uma Izandla Zakho Zizwakala Zilukhuni, Khetha I-Powder Free
Uma izinhlobo zezandla zenza isandla sizizwe kabi, bese ukhetha esingenayo impushana. Kunamagilavu ​​athile ukuze asuse kalula umuntu usebenzisa i-powder coating. Nokho, le mpushana ingenza izandla zakho zome futhi zibe lukhuni.
Uma Uthanda Ukufudumala, Khetha Amagilavu ​​Ane-Inner Lining
Ebusika, lapho isimo sezulu sibanda, izinga lokushisa lamanzi liyehla, ngakho-ke khetha amagilavu ​​alayishiwe. Izonikeza umuzwa obushelelezi owenza ukuhlanza izitsha kube lula. Ngesikhathi esifanayo, ulwelwesi lusiza ukuvimbela amabhaktheriya futhi lunciphise isikhunta.
Amagilavu ​​Okugeza Izitsha aphezulu ayi-10 adumile
Ukusetshenziswa kwamagilavu ​​kubonakala kuvamile kwabesifazane ekuphileni kwansuku zonke kwanamuhla. Ukusetshenziswa kwamagilavu ​​kuletha izinzuzo eziningi uma usebenzisa, yingakho kuwumkhiqizo odumile. Lapha, amagilavu ​​aphezulu ayi-10 okugeza izitsha adumile.
1. Amagilavu ​​okugeza izitsha ane-OEM afakwe ulayini GTRB-01
Amagilavu ​​okugeza izitsha anemigqa ye-OEM GTRB -01 enziwe ngezinto zenjoloba zemvelo, aphephile esikhumbeni uma esetshenziswa. Ngaphandle kwalokho, ngobude obufinyelela ku-50cm ukusiza ukuvikela izingalo zakho ngendlela efanele, akuthathi isikhathi esiningi ukugoqa imikhono yakho njalo lapho ugeza izitsha.
Idizayini yerabha yokulwa nokushelela futhi ukhawule isimo samanzi egilavuni. Ngesikhathi esifanayo, ingaphakathi libuye libe nomugqa ozwakalayo osiza ukugcina izandla zifudumele lapho ugeza izitsha.
2. I-OEM Izwa I-Lining Latex Gloves GG24
Lolu hlobo lwamagilavu ​​lwenziwe ngezinto zenjoloba zemvelo, ukumelana nokushisa okuphezulu futhi lungafinyelela ku-130 degrees Celsius.
Ngomklamo wesipontshi ngaphandle, ngakho-ke ingasetshenziswa njengesipontshi esivamile sokugeza izitsha, esiza ukugeza amabala anenkani ezitsheni.
3. I-Showa Oil Resistant Dish Gloves 707D
I-Showa 707D amagilavu ​​okuwasha izitsha amelana nowoyela enziwe ngerabha yokwenziwa ye-nitrile. Ngesisindo esincane, esincane sokusetshenziswa okulula. Ngesikhathi esifanayo, amagilavu ​​nawo asiza ukuvimbela ama-grease namabala amakhemikhali, anokumelana nokugqwala okuphezulu.
Ngaphezu kwalokho, indawo yangaphandle iklanyelwe ngezingqimba zokuthungwa, i-anti-slip, anti-dirt. Ngakho-ke, ingasetshenziswa isikhathi eside, ezindaweni ezimanzi, futhi isahamba ngokukhululeka.
4. Ukusebenzisa I-Vinyl Gloves Engashadile (ama-pcs angu-100)
Lona umugqa womkhiqizo osezingeni eliphezulu onethegi enamanani aphezulu. Yenziwe nge-vinyl encane, egona isandla isiqinise, esiza ukuhlanza amabala anenkani ezitsheni.
Ngaphandle kwalokho, ngosayizi abahlukahlukene ukusiza amakhasimende ukukhetha ngokukhululekile uhlobo olulungile. Ngaphezu kwalokho, ingxenye yesihlakala ijikijelwe ukuze kukhawulwe ukushelela noma ukufaka amanzi kumagilavu.
Ngesikhathi esifanayo, ingaphakathi lomkhiqizo line-powder layer esiza ukumunca umjuluko futhi kulula ukuyisusa lapho isetshenziswa. Kwabanye abantu abangase babe nokungezwani nempushana, amagilavu ​​angenayo impushana angaba inketho. Lo mugqa womkhiqizo ufanele ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa kuphela.
5. I-Goldsee Smart Dishwashing Gloves GS0043
Kungumkhiqizo we-2-in-1 ovikela zombili izandla futhi umiselele indwangu yezitsha. Ngendwangu ewugqinsi, ethambile ekhihliza kalula amagwebu ngaphandle kokunwaya izitsha lapho iwashwa futhi isiza ukuqeda noma imaphi amabala anenkani.
Idizayini ene-elastic, usayizi awumude kakhulu ukuthi ungalingana ngaphandle kokubangela ukuthandelwa. Indwangu ewugqinsi nefayibha enayiloni yokwenziwa, ngakho inekhono elihle elingangeni manzi. Futhi usize ukudala indawo efudumele ngaphakathi lapho kufika inkathi ebandayo.
6. Amagilavu ​​enayiloni e-Seiwapro (ama-pcs angu-100)
Yenziwe nge-polyethylene, incane futhi isobala, ifanele ukusetshenziswa kwesikhathi esisodwa isikhathi esifushane. Ayikho iphunga lepulasitiki futhi iphephile ukuyisebenzisa. Ngebhokisi lezicucu eziyi-100, lingasetshenziswa isikhathi eside. Nokho, lo mugqa wamagilavu ​​ubiza kakhulu.
7. Showa Showa Dishwashing Gloves
Ubukhulu obungama-30cm ubude, benziwe ngezinto ezisezingeni eliphezulu ze-vinyl, alikho iphunga elibi. Ngakho-ke, lo mugqa wamagilavu ​​uthandwa kakhulu.
Ngokuklanywa kwengxenye yegilavu ​​yomunwe nesihlakala enogqinsi oluphindwe kabili, umzimba ugona isandla somsebenzisi. Zizwe ukhululekile uma usebenzisa.
Ngaphezu kwalokho, amagilavu ​​anomugqa owenziwe ngemicu ye-cellulose emunca umjuluko futhi ilwe namagciwane. Ngakho-ke, isandla sivuleke kakhulu.
8. I-Ansell 2-Color Dishwashing Gloves 87-900
Ubukhulu buyi-32.3 cm ubude, 0.68mm ubukhulu, obuhlanganisa izingqimba ezimbili. Isendlalelo sangaphandle senziwe ngerabha yemvelo kanye nerabha yokwenziwa, kuyilapho ungqimba lwangaphakathi luwumbombo lukakotini. Isiza ukuvikela izandla kumakhemikhali okuhlanza ayingozi.
Ulwelwesi lwenziwe ngekotini elihlanzekile, eliphephile kakhulu futhi lisiza ekunciphiseni ukucasuka esikhumbeni. Lo mugqa womkhiqizo ugunyazwe amazinga okuphepha kubasebenzisi.
9. Amagilavu ​​eSilicone
Lena igilavu ​​yomkhiqizo waseKorea enempahla ye-silicone ekwazi ukumelana nokushisa okuphezulu nokuphansi esukela ku- -40 degrees Celsius kuya ku-160 degrees Celsius.
Ngomklamo wongqimba we-silicone owugqinsi wokusiza esikhundleni samanikiniki okuwasha izitsha, kulula ukwenza igwebu ukuhlanza izitsha, izitsha nezinti. Ngesikhathi esifanayo, enezici zokungangeni kwamanzi, u-oyela-ubufakazi, ukuqina okuphezulu, ukhululekile ukusebenzisa amagilavu ​​isikhathi eside.
10. 3M Scotch-Brite Household Gloves Lemon Flavour
Yenziwe ngezinto zenjoloba ezinenani eliphansi, lona umugqa wamagilavu ​​okhethwa abantu abaningi. Ngaphandle kwalokho, ulwelwesi lukakotini oluncane lusiza ukuvikela izandla emiphumeleni yokuhlanza amakhemikhali namanzi abandayo.
Ngaphezu kwalokho, lolu ngqimba lukakotini lubuye lube nomthelela wokumunca umjuluko, ulethe induduzo lapho lusetshenziswa. Ngaphandle kwalokho, lolu hlobo lwamagilavu ​​lusiza futhi ekukhipheni iphunga elipholile likalamula, okuletha umuzwa omnandi lapho lisetshenziswa.
Ngethemba, ngolwazi mayelana namagilavu ​​okugeza izitsha esihlokweni esingenhla, kuzosiza abasebenzisi baqonde kangcono lo mugqa womkhiqizo futhi benze ukukhetha okufanele. Ungakwazi ukugeza izitsha kalula futhi ngokushesha ngenkathi uvikela izandla zakho kumakhemikhali kanye namafutha.
Xem Thêm Cách sử dụng nồi chiên không dầu Philips cho người mới mua về | Muasalebang
[Review] Top 3 kem trị mụn La Roche Posay chi tiết nhất | Muasalebang